Sivanin’i Shina Ny Hetsi-Panoherana Fananganana Orinasa Shimika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2013 16:15 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, русский, Svenska, Español, Français, 日本語, বাংলা, English
Araka ny nolazain'ny fampitam-baovaom-panjakana, mana-pikasana ny hanangana orinasa shimika (mpanao fanafody) eo anilan'ny tanànan'i Anning ny Vondron'Asa Nasionalin'i Shina Mpitrandraka Solika hamokatra 500.000 taonina paraxylene (PX) hanaovana fananganana. Olona manakaiky ny 3000 no nivory teo afovoan-tanàna hanohitra ny mety ho fiparitahan'ny PX.
Efa nisy fihetsiketsehana tahaka izao ihany koa nipongadra tany amin'ny tanàndehibe hafa. Tamin'ny 2007, olona an'arivony tany amin'ny tanàna faritra atsinanan'i Shina ao Xiamen no nanohitra fananganana orinasa mpamokatra PX. Tao anatin'ny roa taona izao, fihetsiketseha-panoherana NIMBY roa goavana no nipoaka tao Dalian sy Ningbo.
Mpanao fihetsiketsehana manao sarontava saimbolika sy mampiakatra afisy mampitandrina ny lozan'ny fiparitaky ny paraxylene (PX). (Avy amin'ny Sina Weibo)
Mpisera Weibo iray “Boluocun Yihao” avy ao Kunming no niantso [zh] fanohanana an-tserasera bebe kokoa:
Famehezana ny fampitam-baovao, fanapahana ny antso finday, ny polisy heverinaho miaro ny vahoaka tsy niaro ny vahoaka, “Ry orinasam-panadiovana solika-shimika XX, mialà an'i Kunming!” Tsy mila reniranon-dronono izahay [lasa nivadika lokon-dronono ny renirano ao Kunming noho ny loto], Tsy mila PM2.5 [fandotoan-drivotra] izahay, tsy mila PX izahay. Miangavy aparitaho ity hafatra ity. Arovy i Kunming renintsika.
Mpisera Weibo iray hafa avy ao Kunming nitsikera [zh] ny sivana mihatra amin'ny fampitam-baovao:
Nanao izay hampiàko [zh] ny fahatsapana ao anatiny ny mpitendry mozika iray avy ao Kunming “Yinyue Xiaosun”:
Ny mpisera Weibo “Kong Batian” nampahatsiahy [zh] Fampirantiana Voly Voninkazo Mondialy notontosaina tao Kunming tamin'ny 1999:
Nanatsonga [zh] ny tononkalo nosoratan'ny mpanao gazety malaza Bai Yansong ny mpisera Weibo maro:
Marika mivaky hoe “Dadatoa sy nenitoa, mila rivotra madio izahay!” (Avy amin'ny Sina Weibo)